Amarkii Madaxweynuhu Faray Guddida Bilicda Caasimada Waxa Uu U Muuqdaa; Qawda Maqashii Waxna Ha U Qaban!!! – somalilandtoday.com
Amarkii Madaxweynuhu Faray Guddida Bilicda Caasimada Waxa Uu U Muuqdaa; Qawda Maqashii Waxna Ha U Qaban!!!
(SLT-Hargeysa) Dawladda hoose ee caasimada Hargeysa, gaar ahaan guddida bilicda caasimada shaqadoodu waxay tahay sida magacagooduba ka turjumayo, hagaajinta iyo sare u qaadida bilicda amaba quruxda caasimada oo ah muraayada waddan kasta laga dheehan karo horumarkiisa.
Haddaba Iyadoo ay sidaa tahay ayaa caasimada Somaliland ee Hargeysa, ayaan-darrada ka muuqata dhanka bilicdeeda waxa sabab u ah oo masuuliyada kaalintaasi gabay Dawladda hoose ee caasimada Hargeysa, gaar ahaan guddida bilicda caasimada.
Guddida bilicda caasimada ayaa hawl qabta kaliya marka madaxweynuhu amar bixiyo amaba ay cabasho xoogani ka timaad bulshada ee ay gaadho madaxda, taasi ayaa inta badan keenta in Guddidaaasu ay markaasi qaado tallaabo fasirkeedu muuqdo oo ah in ay xililkooda ku ilaashanayaan, taasi oo ah amaba la odhan karo, “Qawda maqashii”
Tusaale ahaan; dhawaan ayay ahayd markii madaxweyne Muuse Biixi uu amar ku siiyay masuuliyiinta dawladda Hoose oo ugu horreeyo maayirka caasimadu oo hawlgaliyay Guddida bilicda, amarkaasi oo ahaa in la furo dhammaan laagaha (Diriinayjyada) la awday oo keenay daadadkii roobka mari kari waayaan, isla markaana sababay burburka hanta farabad, kadib markii daadku uu galay guryaha laagahaasi ku agyaalay, dad iyo duunyana qaaday.
Waxa jirtay in shirkadda Seeraar oo ay leeyihiin Ilma Seerar ay dusha ka xidheen Laag (Diriinayj) ka mid ah laagaha mara degmada 26-ka June, gaar ahaana xaafada Gol-jano, taasi oo cidhiidhiday biyihii halkaasi marijiray, waxaana xusid mudan horaantii sanadkii 2018 in dhibaato ay dhiska laagtaasi sababtay, dhegaha laga furaystay oo aan haba yaraatee dawladdu waxba ka qaban.
Iyadoo biyihii halkaasi marijiray ay ku yaraadeen, keeneena inay ku fatahaan guryaha ilaa 400mtr u jiray aagaasi.
Khasaarahii iyo dhibaatadii soo gaadhay xaafadahaasi ayaa dawladu booqasho ay dadkaasi ugu timid maahane aanay waxba ka qaban, waxaana dhacday in qof walbaaba isku qabo wixii soo gaadhay ee aanay sababteeda lahayn.
Bani’aadamka Alle caqlibuu siiyay ay ku fikiraan oo dhibaato mar ku dhacday ay ka tabaabushaystaan sidii mar labaad aanay ugu soo noqon lahayn.
Waxa dhacday isla sanadkan aynu ku jirno ee 2019, roobabkii Raxmaanku innoo shubay ee Nimcadiisa ahayd ay mar kale dhibaato ku keeneen bulshada.
Isla goobtan (Ilma Seerar ay dusha ka xidheen) ay sababtay khasaare kii doorkii hore ku laba jibaaran, waxa muddo 7 maalmood iyo habeenadoodii banaanada u hoyday in ka badan 10 qoys oo daadkaasi ka baa’biyay guryahoodii iyo hantidii u taallay, guryaha uu saameeyay daadkaasina waxay dhanaateen 37 aqal.
Madaxweynuhu amar buu bixiyey oo uu siiyay Dawladda hoose ee caasimada Hargeysa, kaasi oo ah; in la furo dhammaan laagaha (Diriinayjyada) la awday. Laagtaasi waa la furay lamana furin!
Ilaa maanta dhibaatadii halkaasi ka dhalan jirtay waa ay taallaa, waayo?. Wali waxa meeshii buuxa jajabkii sagbaddii laga furay oo dhex taala laagta, waana shub ka samaysan walxo adag, sida sibidh iyo dhagaxaan iyo garaa’id.
Tusaale fiican waxa innoo noqonaya roobkii Maanta da’ay, kadib markii daadkii soo maray laagtaasi uu qaadi waayay inyar mooyaane wixii sagbad iyo biro isku shubnaa ee lagaga dhex tagay markii sagbaddaasi la furayay, waxaanay keentay in laagtu cidhiidhi ku noqoto daadkii marayay oo markii dambe banaanka uga soo booday sidii caadada ahaydna dul maray aqaladii uu hore u banaystay.
Waxa Xusid Mudan in jebintii la jebiyay laagta ay Ilma Seeraar dusha ka owdeen ay badbaadisay guryihii daadku labadii goor ee horeba banaysan jiray, waxaanay tallaabadaasi keentay in daadkii ka dhashay roobkii maanta da’ay uu si toos u maray laagtaasi la furay, walow ay cidhiidhi ku ahayd, maadaama aan laga hagaajin waxyaabihii ka hadhay markii la jebinaayay sagbadda oo garaa’id iyo shub ishaysta ay qabteen xashiiskii daadku sitay, balse waxa la odhan karaa sidii hore waa laga badbaado badnaa maanta.
Haddaan arrintan wax laga qaban oo aan laga nadiifin qashinka iyo walxaha kale ee buux dhaafiyay laagaha biyuhu maraan, waxa dhici doonta in magaaladu ay sabbayn doonto amaba degi doonto oo biyaha laagaha dedan ku hoos xanibani dejin doonaan dhismayaasha ay hoos maraan iyo magaaladaba.